State Counsellor receives Ambassador of the Republic of Croatia – Ministry of Foreign Affairs
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr Kreso Glavac, Ambassador of the Republic of Croatia who has completed his tour of duty in Myanmar at 10:30 am on6November 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to promotion of bilateral relations and cooperation in the fields of economy, tourism, people-to-people contacts and sports particularly in football between Myanmar and Croatia.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခရိုအေးရှားသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခရိုအေးရှား သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kreso Glavac အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ခရိုအေးရှား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ ခရီးသွားလာရေး၊ ပြည်သူချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဘောလုံးအားကစား အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကဏ္ဍများအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။